I-Zavers: Ukusatshalaliswa kwekhuphoni ledijithali kusuka ku-Google | Martech Zone
I-Zavers: Ukusatshalaliswa kwekhuphoni ledijithali kusuka ku-Google
NgoLwesine, Februwari 20, 2014 NgoLwesine, Februwari 20, 2014 Douglas Karr
I-Google inweba ukufinyelela kwayo ekusatshalalisweni kwamakhuphoni edijithali nge IZavers. I-Zavers yenza abathengisi bakwazi ukuthola amakhuphoni afanele kubathengi abalungile, bandise izinhlelo zemiklomelo, futhi balandele ukuhlengwa ngesikhathi sangempela. Abathengi bathola izaphulelo zabakhiqizi kumawebhusayithi abo abawathengisayo futhi bangeze amakhuphoni edijithali kumakhadi abo aku-inthanethi. Ukonga kudonswa ngokuzenzakalela ekuphumeni lapho abathengi baswayipha ikhadi labo lemiklomelo noma bathayipha izinombolo zabo zocingo - akukho ukuskena noma ukuhlelwa kwamakhuphoni angokwenyama okudingekayo.
Izinzuzo Zokusabalalisa Kwamakhuphoni Wedijithali
imivuzo - I-Zavers ngeGoogle ikuvumela ukuthi unwebise izinhlelo ezikhona zokukhuthaza futhi uklomelise ukuthenga ngamakhuphoni edijithali. Unganikela futhi ngezaphulelo zomkhiqizi kumakhasimende ngaphandle kokudinga ukudala uhlelo lokukhuthaza.
Khulisa isivinini sokuthengiselana kwirejista - amakhuphoni asetshenziselwa ukuthenga ngokukhululekile ngaphandle kwesidingo sokubonisa nokuskena iphepha noma amakhuphoni edijithali. Ukuhlengwa kwenzeka ngesikhathi sangempela, kunciphisa ukungqubuzana nesikhathi sokuphuma. Amakhasimende asebenzisa i-Google Wallet nawo angasebenzisa ngokushesha amakhuphoni abo ngokuthepha ifoni yabo ekuphumeni.
Yenza lula ukukhokhelwa kwesigqebhezana - IZavers ngeGoogle yenza ukuhlala kube lula, kusheshe futhi kuvimbele ukukhwabanisa.
Khulisa usayizi webhasikidi - Thola ukufinyelela kunethiwekhi ebanzi ye-Google yamakhuphoni womkhiqizi ukukusiza ukukhulisa usayizi webhasikidi kanye nokuhamba ngezinyawo uye ezindleleni ezintsha
Ukusatshalaliswa kwempokophelo - Amandla wokuhlukaniswa kwabathengi akuvumela ukuthi uhambise amakhuphoni afanele kumakhasimende afanele. Nweba ukufinyelela kwamakhuphoni aqondisiwe kuwebhu yonkana ngenethiwekhi yesikhangiso yakwaGoogle kanye ne Inethiwekhi Yokubonisa ye-Google.
Imodeli yokuhlengwa kokukhokha ngakunye kwe-Zavers iqinisekisa ukuthi azikho izimali zokusatshalaliswa, okuvelayo, noma okulondolozayo - kukhokhwa kuphela lapho ikhasimende selithenge isigqebhezana somkhiqizo okhuthaziwe. I-Google Display Network yinethiwekhi enkulu yokukhangisa yalolu hlobo, efinyelela ngaphezu kwabantu abayisishiyagalolunye kwabayishumi e-US
Tags: Isigqebhezanaizikhangiso zekhuphoniukusatshalaliswa kwekhuphoniukuhlengwa kwekhuphoniamakhuphoni edijithaliGoogle +amakhuphoni eselulazavers
I-imeyili kanye Nezindaba Zomphakathi Jugalbandi
ISerchen: Isilinganiso Sakho Sezilinganiso Zokusebenza Nesiza Sokubuyekeza